आज घट्यो सुनको मूल्य ! कति पुग्यो तोलाको ?
नेपाली बजारमा सुनको भाउ तोलाको ९२ हजार ७ सय पुगेको छ । बुधबारको तुलनामा बिहीबार (आज) एकैदिन तोलामा १ सय रुपैयाँले घटेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले बिहीबारका लागि छापावाल सुन तोलाको ९२ हजार ७ सय तोकेको छ । बुधबार तोलाको ९२ हजार ८ सयमा कारोबार भएको थियो ।
यस्तै, तेजावी सुनको भाउ पनि तोलाको ९२ हजार २ सय ६० पुगेको छ । बुधबारतोलाको ९१ हजार ३ सय ६० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यसैगरी चाँदीको भाउ पनि तोलाको एक हजार नाघेको छ । महासंघले आजका लागि चाँदीको भाउ तोलाको १ हजार ५ रुपैयाँ कायम गरेको छ ।